La kulan Agent Talent
5 Talooyin ku saabsan sida dib uga soo kabasho looga soo bilaabo Kulanka Wakiilada Dalxiisayaasha
La kulan Agent Talent. Gary Burchell / Taxi / Getty Images
Inta lagu jiro xirfaddaada, waxaad u badan tahay inaad la kulanto wakiilo badan iyo / ama maareeyayaasha illaa aad ka heshid mid ka mid ah xariifta aad u fiican tahay. Si la mid ah shukaansiga, qaar ka mid ah kulamadaas oo lala yeesho wada-hawlgalayaasha ganacsiga ayaa si fiican u soo bixi doona, qaar kalena ma noqon karaan kuwo aad u weyn. Maxaad samaynaysaa haddii aad ka qaybgasho kulan lala yeesho wakiil talanti ama maareeye tayo leh ma fiicna? Riix bogagga soo socda si aad u akhrido 5 waxyaabo oo aad maanka ku hayso.
1) Fahmaan inaad Adkeysii Ku Fiicanayd
Wareega / Paul Bradbury / OJO + / Getty Images
Fahmaan inaad Adkeysid Best!
Waxaan dhowaan qoray maqaal ku saabsan waxa la sameeyo haddii aad dareento in aad haysatay "baaritaan xun" . Inta badan macluumaadkaasi sidoo kale waxay khuseeyaan kulanka wakaaladda oo aan si fiican u socon. Haddii aad ka tagto kulankaada adoo leh wakiil karti leh oo aad dareentid inaad niyadjabto, ama aad dareentid inaadan qaban shaqadaada ugu fiican, ha ku adkaan naftaada. Haddii aad isku dayday sida ugu fiican ee aad sameyn kartid waqtiga kulanku, waxaad sameysay shaqo weyn! Aan la kulanno, shirarka hay'adaha ma fududa. Jilayaasha badanaa waxay dareemaan cadaadis ay ku muujinayaan wakiil, taasina badanaa waxay keenaysaa dareemo dheeraad ah.
Waxaan dhawaan la kulmay wakiilo tayo leh - oo kulankaas si daacad ah u noqday inuu ka mid noqdo kuwa ugu xumaa ee aan ku jiray 7 sano oo aan ka shaqeeyay madadaalo!
Inkastoo aan diyaariyey oo aan helay tababar ku saabsan goobta aan qaban lahaa waxaan qaban lahaa ka hor shirka (taas oo ah wax looga jeedo in la sameeyo kahor kulanka haddii ay suurtagal tahay), ma ahan maalin uun! Waxaan dareemay "off," waxaana dareemay dareen. Waxaan soo bandhigay waxqabad aan ka fogeyn wax aan ka ogahay inaan awoodi karo. Tani waxay naga dhigaysaa nooca labaad ee ku saabsan waxa la sameeyo haddii xaaladdan!
2) Aqoonsiga Maxay Tilmaami Karaan
Aqoonsiga Waxa La Iska Badali Karo
Ka dib markaan ka tago kulankayga, waan dareemay oo aan niyad jabay. Waxaan bilaabay inaan diirada saaro waxyaabaha xunxun, sida "Waxaan sameeyay shaqo halis ah" iyo "Anigu ma aheyn mid aad u liita," iyo "Waxaa laga yaabaa inaanan jilicsanayn."
Waa waqtiyadan saxda ah ee fikradaha xun xun ee ku dhici kara maskaxdaada - fikradaha ku saabsan bixinta, ama su'aalahaaga ku saabsan xirfadahaaga. Waa inaad ku dagaalamaa dareenadaas, iyo hal hab oo sidan loo samaynaayo waa in loola jeedo xaaladda xun ee xun ee wax ku ool ah! Maxaad ka baratay waayo-aragnimada? Maxaad ka sii wanaajin kartaa kulamada xiga ee xiga? Waxaan garwaaqsaday in dareenkaygu ka yimid inuu dareemo kalsooni la'aan inta lagu jiro kulankaas. Waxaan ka dhigay dhibic si loo hubiyo in aysan mar kale dhicin. (Waa kuwan soo jeedin ah inaad keeneyso kalsooni aad uhesho kulammada wakaaladda xiga ee talada!)
Xirfadlaha jilaha waxaa ka buuxsama sheekooyinka sida kan kor ku xusan - dareenka hooseeya ilaa meesha aanad u maleyneynin inaad sii socon karto. Dhinaca kale, ganacsiga ayaa sidoo kale ka buuxay sheekooyin niyadjab iyo diidmo kuwaas oo markaa u sheegay qaar ka mid ah dadka ugu guulaha badan, sababtoo ah waxay diiday inay iska daayaan! Tusaale fiican waa Walt Disney, oo la kulmay caqabado badan oo lagu guuleysto, haddana Disney ma noqon doonto riyadiisa.
Ha u oggolaan inaad naftaada siiso fikradaha xun xun markaad la kulanto xaalad adag sida shirwayne niyadjab leh. Caqabadahaasi ma joojin doonaan inaad noqoto jilaa iyo qof aad kudoonayso inaad noqotid. Iyo inaad ka hadasho mustaqbalkaaga iyo mustaqbalka shaqadaada, adigana - maaha wakiilkaaga - awooddaada gacantaada ku qabo.
3) Waa Mihnad-Kale, Ma aha Xirfadlaha Wakiilkaaga
Xusuusi naftaada: Waa xirfad aad adigu leedahay, ma aha shaqaalahaga wakiilkiisa
Kulanka hay'adda "xun" ama niyad-jaban maaha inuu sameeyo ama jebiyo xirfadaada shaqo. Iyadoo aan loo eegin natiijada ka soo baxday kulan lala yeeshay wakiil talanti, wakiil ma noqon doonto sabab keliya oo aad ku guuleysan doonto ganacsigan. Miyaad kireyn kartaa wakiil wanaagsan oo kaa caawinaya inaad si firfircoon uga shaqeysid? Xaqiiqdii. Laakiin, inkastoo ay jiraan qaar ka mid ah wakiilada cajiibka ah ee ciyaarta, waa doonistaada inaad ku guuleysatid, anshaxa shaqadaada iyo tayadaada kuugu qaban doona ganacsigan. (Kadib dhammaantiis, qofka keliya ee aad si dhab ah ugu tiirsanaan kartid waa adiga). Xusuusi naftaada - xitaa haddii aad la kulantay kulan aad u xun oo lala yeesho wakiil sare - ma joojin doonto adiga ama xirfaddaada horumarinta. Kaliya waxaad leedahay awood aad ku joojiso ama socotid - cid kale ma go'aamiso. (Waxaan dhihi karaa: had iyo jeer sii soco !)
4) Dalbo hay'ado badan oo tayo leh
Codso oo la kulmaan wakiilada tayo leh. Robert Daly / Caiaimage / Getty Images
Codso wakaalado dheeraad ah
Waxaa jira hay'ado badan oo ka baxsan ganacsiga madadaalada oo yaqaan waxa la qabanayo. Waxaan kuugu kalsoonaan karaa inaad heysato wakiil meeshaas ku haboon oo aad ku shaqaaleysiin karto. Haddii aad dhawaan la kulantay shir niyadjab leh, samee dhibic si aad u dirto madaxaaga oo aad u sii wadato kuwa kale! Mar labaad, sida shukaansi, dhibaatada hore ee khibrad xumo (ama diidmo) waxay noqon kartaa mid adag, laakiin marka aad dib ugu soo laabato ciyaarta, waxaad dareemi doontaa aad u fiican. (Waa kuwan liiska shirkadaha SAG-AFTRA.
5) Noqo Wakiilkaaga!
Noqo Wakiilka Dalabkaaga! Diane39 / E + / Getty Images
Waxaan run ahaantii aaminsanahay in - xitaa haddii aad la saxiixatay wakiilka ugu fiican magaalada - waa inaad waligaa noqotaa wakiil kuu gaar ah. Inta badan guulaha aan nasiib u yeeshay inaan mustaqbalkayga ku arko mustaqbalkayga, oo ay ka mid yihiin doorka cayaaraha ee telefishanada iyo bandhigyada, waxay ahaayeen kuwo aan caawimaad ka helin wakiil talon ama maamul. Waxay ku dhacday shaqa adag iyo damqasho - oo ay ka mid tahay " cayayaan qurux badan !"
Haddii aad raadineyso xirfad shaqo, waxaad tahay maamulahaaga. Waxaa muhiim ah in la xasuusto in xirfaddaadu ay awood u yeelan karto oo ay noqon doonto wax aad jeceshahay inay noqoto. Waxaad marwalba ka heli kartaa sawirro gaar ah oo aad adigu leedahay , iyo hadda YouTube iyo warbaahinta cusub oo isbeddelaya habka ay warshadu u shaqeyso heerar badan, waxaad haysataa fursad aad ku hesho naftaada iyo tayadaada aduunka intaa ka sii horeysay!
Adiga, asxaabtayda saaxiibkay, waa kuwo aad u tayo badan, iyo shir niyadjabeed waa in aysan kaa joojin inaad gaarto kartidaada. Had iyo jeer sii wad horrey u socoshada - waan rumaysanahay!
Saaxiibo, waxaan had iyo jeer isku dayaa inaan ku siino sawir dhab ah oo ka mid ah sida Hollywood ah sida actor. Ka dib shirkii niyad jabay ee aan ku sharraxay qodobkan, waxaan sii waday socodka iyo dhowaan la soo dhaweeyay wakiil cusub oo leh wakiil tayo leh oo fantastik ah. Haddii aad isticmaasho "maya" kasta oo dhiirigalin u ah inaad sii wado, waad gabi ahaanba ku guulaysan kartaa oo riyadii aad riyadii ka qaadi lahayd! Marna ha sii daynin! ( Halkan riix si aad u akhrido jilicsanaha Irish Jenny Dixon ayaa sheegaaya inaan waligaa iska joojin !)
Yaboohida Yul Brynner
Qorista Warqad Hage ah Wakaal Daliban
7 Talooyin Ku Saabsan Xagee Lagu Helo Maqalka
Sidee loo dhajiyaa Xisaab
Dhisidda Websiteka oo ah Jileyaal
Ilaa aad ka tagto Maalintaas Shaqada, Baro Lots of Lessons laga!
Si buuxda ugu Saabsan inaad Nabad Ku Nooshahay
Sida loo Diyaargaroobo Madaxa Sawir Sawir
Muuqaalka iftiinka on Star: Don Bloomfield
Muuqaaladda Dhalinyarada Dhallinyarada "Saacadaha Caruurta"
Talo soo jeedin loogu talagalay soo wareejinta dib u soo celinta
Guudmarka kooban ee magaalooyinka Sanctuary
Waa maxay macnaha erayga Heteronormativity?
Northenth Avenue North Biography
Maxay Naasku Nasiibinaysaa Afkaaga Qalooca qabow?
Romanticism iyo Supernatural ee Edgar Allan Poe ee Ligeia
Qeexida Vacuum and Examples
Sida Loo Helo Fikradaha Muujinaya Meel Weyn
Ka soo saar Bismuth Metal oo ka soo jeeda Pepto-Bismol Kiniiniyada Antacid
10 Xaqiiqooyin Copper
Aasaaska Heerka Tilmaamaha Jilayaasha
Mabaadi'da 5aad iyo 10 Dhibaatooyinka Hinduuga
Maxaad u diiddan tahay Catholics Roman oo u heesata Alleluia inta lagu guda jiro?
Sida loo Isticmaalayo Ficilka Faransiiska ee u dhiganta
Tusaalaha Imtixaanka Permutation
Yoi ichinichi o - Hadalka Japan ee fudud
Horudhaca Shanta ah
La Vache! - Faah faahin Faransiis ah
Ciriiriga Sagittarius - Jirkaaga Cajirka ah
Sidee bay bani'aadamku u dareemaan khaniisnimada?
Yaa soo saaray OLED Technology?
Sida Laydhka looga helo Batariga
Sharciga Labaad ee Thermodynamics iyo Evolution
1989 British Open: Calc Wins In Playoff ah
Barashada Xirfadaha Xisaabinta Lacagta
Waa maxay lacagta mugdiga ah?
Maxaa Looga Dhawaaqay Sharciga Sharciga Obama?